Tyler Sizemore/Hearst Connecticut MediaSalutatorian Kevin Membreno breaks down in tears during his Salutatory Address at the 93rd Annual Commencement at Warren Harding High School in Bridgeport, Conn. Tuesday, June 18, 2019. The Class of 2019 was the first to graduate from the new Warren G. Harding High School on the long-awaited Bond Street location.
Tyler Sizemore/Hearst Connecticut MediaGraduating senior Damarys Seda cheers during the 93rd Annual Commencement at Warren Harding High School in Bridgeport, Conn. Tuesday, June 18, 2019. The Class of 2019 was the first to graduate from the new Warren G. Harding High School on the long-awaited Bond Street location.
Tyler Sizemore/Hearst Connecticut MediaDodley Faure dances while walking across the stage to receive his diploma at the 93rd Annual Commencement at Warren Harding High School in Bridgeport, Conn. Tuesday, June 18, 2019. The Class of 2019 was the first to graduate from the new Warren G. Harding High School on the long-awaited Bond Street location.
Tyler Sizemore/Hearst Connecticut MediaMonique Geddes waves her diploma to her family at the 93rd Annual Commencement at Warren Harding High School in Bridgeport, Conn. Tuesday, June 18, 2019. The Class of 2019 was the first to graduate from the new Warren G. Harding High School on the long-awaited Bond Street location.
Tyler Sizemore/Hearst Connecticut MediaValedictorian Kamrun Nahar addresses the graduating body during the 93rd Annual Commencement at Warren Harding High School in Bridgeport, Conn. Tuesday, June 18, 2019. The Class of 2019 was the first to graduate from the new Warren G. Harding High School on the long-awaited Bond Street location.